UJAY-Z: KUBOMI BAM BONKE, VOL. UPHENGULULO LWEALBHAMU ENYE - IINDABA
Kubomi bam bonke, Umqu. 1
NgeCawa nganye, uPitchfork ujonga ngokujulile kwi-albhamu ebalulekileyo evela kwixesha elidlulileyo, kwaye nayiphi na irekhodi engekho koovimba bethu iyafaneleka. Namhlanje, siphinda siqwalasele i-albhamu yesibini yeJAY-Z, enye ebambekayo njengomboniso wesakhono esikrwada kunokuba sisenzo sokwenza intsomi.
Ngobunye ubusuku ekwindla okanye ebusika ngo-1996, i-JAY-Z kunye ne-Notorious B.I.G. bebephumle kwiNdlu kaDaddy, istudiyo esasiphethwe nguBad Boy eMidtown. Oku phantse kwaba semva kwengozi yemoto eyaphula umlenze wasekhohlo kaBiggie kwaye wamnyanzela ukuba asebenzise isitulo esinamavili, kwaye kamva nenduku, njengoko wayesebenza kancinci kwi-albham yesibini awayecebe ukuyibiza Ubomi Emva Kokufa… Ukufa Kusenza Inxalenye . Abaxhasi be-rap babengabahlobo ukuba akunjalo ngokufanayo: I-LP yokuqala ye-Big, Ukulungele Ukufa , wayethathe umgangatho weentsomi, apho Ukuthandabuza Okufanelekileyo , Ukuqala kukaJay kwiminyaka emibini kamva, kube yimpumelelo ethobekileyo.
Ngobo busuku estudiyo, uBig wadlala uJay eminye imisebenzi iqhubeka: Hypnotize, My Downfall, imbinana yabanye. UJay wayenomona omncinci, ejonga umntu owayeneminyaka engama-25 ubudala wayesele eqhelene nazo zonke iindlela ezithandwayo zerap kwaye wayethimba iitangents ngokuqweqwedisa iintombi zabamangali kwii-single singles. Wayebonakala engenantanga. Okubi kakhulu: UJay wayenengoma enye entsha eyokwabelana naye.
Kwakungavakali ngathi Ukuthandabuza Okufanelekileyo -Yayine-gloss ethe kratya-kodwa yayinamaqhina, indlalile, icacile. Yayibizwa ngokuba ziiSitalato ziJongile, kwaye yayinyusa i-virtuosic, 42-bar yokugqibela indinyana egcwele imisebenzi yeziyobisi eyayihamba kwimida yelizwe, isomiso esondelayo, imibono kaThixo, ijaji enkulu. UBig uyivile kwakanye, emva koko wayidlala kwakhona, emva koko waphinda amaxesha amahlanu. Ekugqibeleni, wema, wajonga uJay ngekona yamehlo. Ngaba i-albhamu yonke iyavakala ngoluhlobo?
Wayengayi kuphila ukuze afumanise. Ngentsasa yokuqala ka-Matshi 9, 1997, uBig wadutyulwa wabulawa kwimpambano yeWilshire Boulevard neFairfax Avenue eLos Angeles. Ityala, njengoko uyazi, alikasombululwa.
Emva kokusweleka kukaBiggie, uPuff Daddy, owaye wafumanisa uBig emva koko wazifaka zonke iividiyo, edanisa, wazimisela ukuhlawula imbeko. Wacela uJay ukuba abhalele iivesi Ndiza kukhumbula , iflip yamaPolisa Umphefumlo ngamnye omthathayo ezakuthi kwakhona ibonise inkosikazi kaBig, imvumi uFaith Evans. UJay wenqabile. Endaweni yoko, waqhuba waya eVirginia Beach kwaye wahambisa intlungu yakhe kwingoma ebizwa IsiXeko Sesam , eveliswe nguTeddy Riley, ebhalwe iBlackstreet (kunye nesaxophone engaziwayo ngelo xesha, pre-Neptunes Chad Hugo), kwaye yakhiwa malunga nesampulu kaGlenn Frey's UngowaseSixekweni , evakala ngathi kukukhwela ilifti yenyama kakhulu. Yintoni isivumelwano, playboy? Ubuza ekuqaleni kwengoma. Phumla nje umphefumlo wakho.
isatifikethi sokubhubha seminyaka engama-25
IsiXeko sesam yeyam Kubomi bam bonke, Umqu. 1 ichithwe kwisampulu yemizuzu emine: yenziwe lusizi kwaye ikhutshiwe sisakhono esingaqhelekanga sobuchwephesha, ipakishwe (kwaye mhlawumbi yonakaliswe) kukulungiswa kwezona zandi zintengiso zelo mzuzu. Ibamba uJay esenza izinto angazama ngokuzingisileyo kwixa elizayo: Mna ndigxile njengoBiggie kwinqanaba lakhe eliphantsi / Kwindawo ephantsi nangona (shh), isixeko sesam sisandulela esilungileyo kwinto azakuyenza ezine kwiminyaka kamva Inkqubo : Kwaye ukuba andingcono kunoBig, ndingoyena ukufutshane. Sisandi setalente ephawulekayo yokuzama ukutsiba ungene kwindawo ephezulu kakhulu kunye nokuntywilisela ukufika nje kancinci.
Ukufa kukaBig kwakushiye ikhefu kwi-rap; ukuba uJay wayenethuba lokuphupha ngokuzalisa yayingummangaliso omncinci. Emva kokurhweba ngento encinci yokunyusa enye kwaye emva koko ibe nkulu kancinci ukuba uyihambise Ukuthandabuza Okufanelekileyo , ileyibhile yakhe, iirekhodi zeRoc-A-Fella, wakwazi ukusebenzisa le albhamu (kunye nomsebenzi kaJay njengombhali wesiporho kuFoxy Brown Ndigula Na Na ) kulungelelwaniso olungaqhelekanga kunye ne-Def Jam. Ukubonakala kukaJay kwi Ubomi Emva Kokufa Uncede umqondiso olandelayo, ixesha elinengeniso ngakumbi kwiRoc. Ingoma awayekuyo, Ndiyayithanda Intlama , luloyiso olufanelekileyo oluncinci, yonke i-sheen kunye ne-sneer. Uhlamba kakhulu uJay, kodwa loo nto isecaleni kwenqaku. Wamkelekile kumdlalo we-Monopoly yemali yokwenene.
Indlela yokuqala yokuqonda IVol. 1 injenge-albhamu kaJay's Bad Boy. Ngaphandle kwe-jilting Puff for Missing You, uJay waqesha abavelisi belebheli ukuba baphathe malunga nesiqingatha se-albhamu, kwaye abo bangakhange bachukumise ubukhulu becala baphinde basayine isignitsha ka-Bad Boy. Ngamanye amaxesha, oku kusebenza kakuhle: indlela i O'Jays batyibilikiswa kwisuti yokuvuma izono ku-jarring kufutshane Kufuneka Undithande, okanye indlela Rene kunye no-Angela, ababesisiseko sokuba ndiyayithanda intlama, morph ibe yinto eyenzakalisayo kuBadlali beNgcinga.
Kodwa, njengophawu lwento yonke yokukhululwa komfana ongalunganga (nkqu Olo skethi ivuliwe Ukulungele Ukufa ), kukho izithuba apho i-albhamu ibonakala ngathi iphoswe kunye ngengozi. Umzekelo, akunakwenzeka ukudibanisa inyani yokuba ukungaxoleli ngokungaxoleliyo Ndiyazi ukuba yintoni Amantombazana athandwayo enziwa ukuba ahambele ngqo kuMdlali. Kule yokugqibela, unenye yeengoma ezicekeceke kakhulu, ezingenakuphikiswa kwikhathalogu kaJay, egqibezele loo monologue yokugqibela ingenangqondo. Kodwa uchitha isiqingatha saloo mzila uzama ukukrwela ingqondo yakho ye-clumsy bullshit kwingoma ngaphambili, ngathi: Andikaze ndibubone ubuso obufana nobakho ngaphambili / kwaye bendikhe ndakhe ndajikeleza noonongogo abahle ngaphambili.
Ngethamsanqa, uJay uhlala enesipho sokunika ubunzulu beemvakalelo kwii-albhamu zakhe ngaphandle kokukopela okanye ukubonisa isandla sakhe kwangoko. Ubundlobongela obenziwe kwiRhyme Azisekho (Dubula ibhloko yonke, emva koko i-ayini endiyiphosayo) kwaye inzima kwiZitalato ziBukele (okokuqala ebomini bam, bendifumana imali, kodwa bekungathi isazela sam siyanditya ) unikwa isibini, umaleko otyhafisayo wecala Kuwe Kufuneka Undithande. Le ngoma ivula ngevesi kumama kaJay, owayenengxaki yokulutha kwakhe njengoko uJay waqala ukungxola: Yonke into oyenzileyo yayindikhuthaza: 'Ungavumeli ukuba ikubambezele!' / Ndenze ntoni? / Wajika, ndathengisa ngawe. Ivesi elandelayo ibalisa ngexesha apho uJay, eneminyaka eli-12 kuphela ubudala, wadubula umntakwabo kumzamo wokufumana ubucwebe. Umntakwabo wasinda, emva koko wacela ukubona uJay esibhedlele ngosuku olulandelayo. Kufuneka undithande , uyaqhekeza.
Umsebenzi wobugcisa wealbham, nangona kunjalo, ndivela phi. Isinikezeli yi Isampulu kaYvonne Fair kuvakala ngathi sisixeko sentsimbi esila abantu baso eluthulini. UJay udlwengula ngokucacileyo malunga neZindlu zikaMarcy, ezichaza yena kunye nabamelwane bakhe njengendawo yonke into ngelixa egculela abantu bangaphandle: Iprodigy, iMobb Deep MC ebikhe yathandana noJay iminyaka, yathatha umgca malunga noMarcy kulapho wena nabantu bakho nixhonywe kwindinyana nganye isingqisho njengefoto ethe ngqo. Ikwangoyena rapa u-Jay akwenzileyo ukuza kuthi ga kweli nqanaba lomsebenzi wakhe: Kukho amaxesha apho angene nzulu epokothweni yokubetha, kunye nabanye xa edlwengula ngokungathi ukubetha sisiphakamiso nje. Embindini wendinyana yesibini, kukho indawo echukumisayo:
Ndibhlokile kude nesihogo, andonelanga kukudubula kuqokobhe
I-ounce kude nomqadi ophindwe kathathu, isasebenzisa isikali sokugcina ubunzima esibanjwe ngesandla
Uyahleka — uyayazi kakuhle le ndawo
Apho kuhlala khona utywala kunye nesiseko
Olu hlobo lwasimahla, lokubaleka, apho yonke imigca inobuchwephesha obugqithisileyo kodwa kuvakala ngokungathi ikhutshiwe kwincoko nje eqhelekileyo, yinto aqhubeke nokugqibelela kuyo Okulandelayo ezininzi years kodwa ubukhulu becala beza kushiya ngo Inkqubo , ukhetha endaweni yee-midtempos ezigayekayo. Ngokujonga emva, IVol. 1 ibambeke ngakumbi njengomboniso wesakhono esiluhlaza kunokuba ibe sisenzo sokwenza intsomi: indlela ahamba ngayo ngaphezulu kokubetha kwi-A Million kunye neMibuzo enye kunye nokugqobhoza kuyo ngengoma yayo yamawele, iRhyme Azisekho, okanye eyandisiweyo, uvuthondaba lweStaccato kwiiSitalato ziBukele, yeyona nto ikhathalogu yakhe yasemva kwe-9/11 ephoswe kakhulu.
Iingoma ezithambileyo zinzima ukulwa nazo. U-Lucky Me unonqulo lwakhe olulandelayo (u-Lil Wayne unombhalo wethambo entanyeni yakhe kunye nevesi evela kulo mfanekiso emlenzeni wakhe) kodwa uqinile kwaye ugqithisile; izikhalazo zayo ngodumo ziyadinisa ngaphezu kokuqonda. Kwaye ke, kunjalo, kukho (Soloko Yiba Ngam) Ilanga. Ukwabelana kwelanga a Isampulu yeKraftwerk nge ingoma yeWhodini ; luhlobo lwento enokubuyiselwa kwimeko yesiqhelo ngokuhamba kwexesha, kodwa ibinokubonakala kabuhlungu kuphelelwe lixesha ngalo mzuzu. Kwaye kukho ividiyo yayo , apho abadanisi bebaleka ngokukhetha ubuchwephesha kwinto ebonakala ngathi sisisu sekhabhathi yeRubik ngelixa uJay efaka isuti eluhlaza-eluhlaza. Yinto embi. Ukukhanya kwelanga ubukhulu becala kuye kwangeniswa kwimibhalo esemazantsi kwikhondo lomsebenzi kaJay-ibingeyompumelelo inkulu ngokwaneleyo okanye inika umdla ngokwaneleyo ukusilela ukubonakala, namhlanje, njengendawo yokujika-kwaye inethamsanqa, ngenxa yokuba isondele kangakanani kwilanga elibengezelayo kakhulu.
Iminyaka esibhozo ngaphambili IVol. 1 waphuma, uJay-Z wayehlala eLondon. Umcebisi wakhe, umntu owayehlala naye eMarcy Houses owazalwa nguJaz kwaye, okwethutyana, wayedume ngokuba ngomnye waba rappers abangatyikitywanga eBrooklyn, waye sele ehambele phambili phantse kwisiqingatha sezigidi zeedola yereyibhile ye-EMI. Wazisa uJay ngaphesheya kweAtlantic, waya kwiflethi e-Notting Hill, ukuze athabathe nantoni na ayifunayo ngelixa i-albhamu yenziwe.
UJohn adams wendlela kwiimuvi
Ekuqaleni, iilebheli zabafana zazibonakala zanele ngokwaneleyo. Iirekhodi ezigqityiweyo zikaJaz zazivakala zisondele ngokwaneleyo kwiinguqulelo zazo zeedemo. Kodwa ngaxa lithile, i-EMI inyanzelise iJaz ukuba irekhode ngengoma eqhuqhekileyo, ekhutshwe yi-ukelele ebizwa ngokuba USophie waseHawaii . Yayiyintlekele enkulu. Ividiyo yayizele ngabadanisi be-hula bexhoma phambi kwezikrini eziluhlaza kunye nemithi yesundu epeyintwe kwiitarps ezinkulu ezaziphakanyiselwe phezulu ukuya esibhakabhakeni sesandi. Khawufane ucinge Ilahlekile Umqhubi olungiselelwe abantwana kwikampu yasehlotyeni. UJay, ovela kwividiyo emva kwezibuko zelanga ezinkulu, ezityibilike kwi-lei, uza kuthi kamva iphantse yazibulala.
pusha t - abathengisi beziyobisi abangaziwa
USophie waseHawaii wayefanele ukuguqula iJaz ibe yinkwenkwezi. Kodwa xa ngokungathandabuzekiyo izitena, ilebheli iyekile ukubuyisa iminxeba yakhe. I-albhamu yehle ngoMeyi ka-1989 njengokubhala irhafu. Yilapho abaphathi be-EMI ekugqibeleni bathatha ifowuni-ukubiza uJay, bezibuza ukuba unomdla kwiirekhodi zakhe.
Oku kwajika isisu sikaJay. Wangcwaba onke amaphupha e-rap awayenawo, wabuya wabuyela eMelika, wasusa urhwebo lwakhe lokuqhekeka ukusuka e-East Trenton, eNew Jersey ukuya eMaryland. Le yayingumbono olungileyo kude kungabikho: Kwakukho ukudubulana kwii-nightclub kunye namarhe okutshayela uphando lwamapolisa.
Xa uJay wabuyela emculweni, wayenomdla kwaye ediniwe ngamava e-EMI. USophie debacle wabonakala eyila indlela yakhe kwishishini kwiminyaka ezayo: Iqinisekisile ukungazithembi kwakhe iinkampani ezirekhodayo; kuyambongoza ukuba aphucule izakhono eziphindwe kabini nezithathu aziphuhlisileyo, emva koko aziphalaze ngento yokunxibelelana ngakumbi. Ubukhosi obunxibe ngokungenasiphelo ukusuka Ukuthandabuza Okufanelekileyo Isigqubuthelo asinakuze sibonakale kwiifutshane zaseBermuda. Ude akhombe uSophie kwingoma yokuvula IVol. 1 -Kwenyani yokuba ikho, kwaye inyani yokuba yamenza wanyamalala. Kwaye akunakwenzeka ukubona ividiyo yeLanga ngaphandle kokucinga, okwesibini, malunga nayo yonke loo mithi yesundu yeplastiki.
Kukho eli qhinga lingakholelekiyo uBig alitsala ekuqaleni Ubomi Emva Kokufa . Ivula ngengoma ebalisayo ebizwa ngokuba ngu-Somebody’s Gotta Die; imivumbo ebanzi yeyokuba omnye wabahlobo bakaBig wakudala unkqonkqoza emnyango ezinzulwini zobusuku enegazi kwizihlangu zakhe, esithi umhlobo wabo udubulekile. Iyelenqe lokuziphindezela kubomi-kwaye liphela ngempazamo embi. Ngqo. Kodwa kwivesi yokuqala, njengokuba ethetha yedwa, uBig uphelisa ukwahlula phakathi kwezi ndaba zolwaphulo-mthetho kunye nobomi bokwenyani: 'Isizathu sokuba ndisisaphuli-mthetho, uyadlwengula,
Indlela ngaphambi kwe-rap shit
Bust a gat, shit-uPuff ngekhe ayazi into eyenzekileyo
Kwi-albhamu ejolise ikakhulu kumava okuba yinkwenkwezi ye-rap, uBig ujonge kwikhamera kwaye uyancwina, ngokungathi uthi: Kuko konke owaziyo, ndingaba sezitratweni ngoku . Amaxesha apho iBig ikubonisa iminyhadala yesi stardom yongeza kwisiphumo-i-barbs kwii-rappers zaseNew York kwiKick eMnyango, ulwimi-esidleleni ukuya kolunye unxweme Ukubuyela eCali.
Ngokuthelekisa, IVol. 1 Umsebenzi ukuphumeza imvakalelo efanayo. Imidlalo yayo kanomathotholo iziva ngathi ngabom, ngokungathi batsalwe kwiseshoni eyahlukileyo ngokupheleleyo kunaleyo Ndikuyo Froms kwaye Izitrato Ngaba Ukubukela. Eyona nto iphazamise imigca phakathi kwepop kunye nomoya ococekileyo (uPlaya Hater) okanye uchazekile ngendlela ababeziphethe ngayo (unazo ezoyikiso zokuqweqwedisa iintombi kwi-Hypnotize, uqhekeza malunga neefowuni kwi-Mo Money Mo Problems); elona xesha uJay esondela kufutshane nalomlingo wesine wokuqhekeza udonga ukuMhlobo okanye uFoe '98, xa sele eza kubulala umntu ophikisanayo kwidolophu yeehotele ezimbini, kwaye umshiya nomyalezo wokuthumela iBig ezulwini. Iingoma zivuliwe IVol. 1 ziphantse zafana ngokugqwesileyo. Kodwa ubukhulu bezentengiso kunye neentsomi uJay wazama ukuzincamathisela kwiseti iyonke, kokukhona isoyikiso sisongela ukubaginya bonke ngaxeshanye.
thanda iingoma zezitalato 2
Irediyo yentloko enomsila wamachibi
mnyama macala omabini
Thumela imovie ye-malone netflix
ikhava ye-albhamu yebhombu ye-cherry
iingoma ezintsha zika joey badass